Sida loo soo dejinta MKV in Final Cut Pro on Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo dejinta MKV in ay Final Cut Pro on Mac (Yosemite ka mid ah)
Doonayaa in ay soo dhoofsadaan files MKV in Final Cut Pro for tafatirka laakiin FCP ma ha uusan aad u samayn? Waa hagaag, Pro Goo Final waa editor video caan ah oo soo baxna users Mac. Oo files MKV furan waxaa loo isticmaalaa oo intaa ka badan oo ay khubaro video tafatirka in la FCP iyo hiwaayadda video tifaftirayaasha qaban. Si kastaba ha ahaatee, MKV aan ay taageerayaan FCP, si aadan u dajiyaan karaa MKV in ay Final Cut Pro si toos ah. Halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa si sahlan loo isticmaali karo oo xirfadle MKV in FCP Converter u Mac si ay kaaga caawiyaan in aad xal u helidda dhibaatada.
Barnaamijkan xalinayo dhibaatada labada degida HD MKV (H.264) faylasha iyo SD files MKV in ay Final Cut Pro by diinta files MKV in FCP taageeray MOV iyo MP4 la video tayo wanaagsan leh oo la yaab leh xawaaraha diinta. Waxaa Hel hadda iyo badalo MKV in FCP qasabno gudahood!
Free download MKV in FCP Converter u Mac :
Sida loo badalo MKV in Pro Goo Final on Mac talaabo talaabo ah
Tallaabada 1. Add files MKV
Riix File dar Media Files button ama jiita iyo hoos u dhac ku darto files .mkv ka your computer. Waxaad ku dari kartaa files badan oo iyaga loogu badalo isku mar.
Tallaabada 2. Dooro qaab wax soo saarka sida Final Cut Pro
Riix labanlaab kor-arrow hoose ee Murayaad barnaamijkan iyo markaas dooran Pro Goo Final sida qaab wax soo saarka hoos ayeey tab si aad u hesho videos filaayo in FCP.
Tallaabada 3. Start si loogu badalo mkv cut dambeeya ee Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah)
Guji Start si ay u bilaabaan faylasha mkv cut diinta final. Waxa kale oo aad edit karaa videos la editor video dhisay-in this Mac MKV in FCP Converter.
Ka dib qaab beddelidda, aad dajiyaan kartaa badaley video files si Final Cut Pro X si fudud. Hambalyo!
Aqoon Wadaag: oo ku saabsan qaab MKV
The MKV (video Matroska) wuxuu furan yahay qaab weel free heer, qaab file in qaban karaa tiro aan xad lahayn oo ah video, audio, sawirka ama kuwan raadkaygay Cinwaan gudaha file hal ah. Waxaa loogu talagalay inay u adeegaan sida qaab universal kaydinta content multimedia caadi ah, sida filimada ama ay muujinayso TV. MKV waa isku mid rimidda in weelasha kale sida AVI, MP4 ama ASF, laakiin gebi ahaanba furan in faahfaahinta, la fulintii oo badanaaba ka kooban furan il software. Noocyada file Matroska waa .MKV u video (la subtitles iyo audio), .mka for files audio-kaliya oo .mks u subtitles kaliya. Isticmaalka ugu badan ee files .mkv waa in uu kaydiyo HD video files.
Sida loo Beddelaan MKV in wmv / wmv HD?
Sida loo Beddelaan MKV in Quicktime MOV (Yosemite ka mid ah)
Sidee baan ku rakiban kartaa QuickTime 7 Pro Wixii OS X Yosemite
Bal maxaa gacan-jabis Converter aan shaqaynayn?
Sida loo soo dejinta FLV in Lugood
Your Photos in Video leexo la Photo si Video Converter
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV si Jabbuuti ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)